Ukufunda isahluko sesibini kwiNcwadi eNtsha yeTestamente yeGalatiya
UPawulos akazange ahluthe amazwi amaninzi kwingxenye yokuqala yencwadi yakhe eya kwabaseGalati, kwaye waqhubeka ethetha ngokuthe ngqo kwisahluko 2.
Kwisahluko 1, uPawulos wachitha imihlathi emininzi evikela ukuthembeka kwakhe njengompostile kaYesu. Waqhubeka nokukhusela kwinqanaba lokuqala lesiqendu 2.
Emva kweminyaka eyi-14 yokuvakalisa iindaba ezilungileyo kwimimandla eyahlukeneyo, uPawulos wabuyela eYerusalem ukudibana kunye neenkokheli zebandla lokuqala-phakathi kwabo uPetros (Kefa) , uYakobi noYohane.
UPawulos wanika ingxelo ngomyalezo awayewatshumayela kwiintlanga, evakalisa ukuba basenokufumana usindiso ngokukholwa kuYesu Kristu. UPawulos wayefuna ukuqinisekisa ukuba imfundiso yakhe yayingqubuzana nomyalezo weenkokeli zamaYuda ecawa yaseYerusalem.
Akukho nto ingqubanayo:
9 Xa uYakobi, uKefas, noYohane, beqaphela njengeentsika, bavuma ubabalo endiwunike lona, ​​banikela isandla sokunene kum, noBharnabhas, bevuma ukuba sifanele siye kwiintlanga kunye nakwalukileyo. 10 Bacela kuphela ukuba siyakhumbula ihlwempu, endiyenza yonke imizamo yokuyenza.
Galati 2: 9-10
UPawulos wayesebenze noBharnabhas , enye inkokheli yamaYuda ebandleni lokuqala. Kodwa uPawulos wayemlethe indoda egama linguTito ukudibana neenkokheli zecawa. Oku kubalulekile kuba uTito wayeyintlanga. UPawulos wayefuna ukubona ukuba iinkokeli zamaYuda eYerusalem zazifuna uTito ukuba enze amasiko ahlukeneyo enkolo yamaYuda, kuquka ukusoka.
Kodwa a bazange. Bamkela uTito njengomzalwana kunye nomfundi kaYesu.
UPawulos wamemezela oku kwabaseGalati njengesiqinisekiso sokuba, nangona bebeZizwe, abazange bafumane amasiko amaYuda ukuze balandele uKristu. Isigidimi sakwaJuda sasingalunganga.
Ivesi 11-14 zityhila iimbambano ezithandekayo ezenzeka kamva phakathi kukaPawulos noPetros:
11 Ke kaloku, xa uKefase efika eAntiyokwe, ndamchasa ebusweni bakhe, kuba wayemgwebile. 12 Kuba wayedla kunye neentlanga phambi kokuba amadoda athile evela kuYakobi. Nangona kunjalo, xa beza, wahamba waza wahlukana, kuba wayeyesaba abo baselulwini. 13 Kwaye ke onke amaYuda ahlanganisa uhanahaniso lwakhe, ngoko noBharnabhas wathathwa ngokunyaniseka. 14 Kodwa xa ndabona ukuba beyaphambukela kwi nyaniso yeendaba ezilungileyo, ndatsho uKefas phambi komntu wonke, "Ukuba wena, ungumYuda, uhlala njengowentlanga kwaye ungenjengomYuda, unokunyanzelisa njani iintlanga ukuba ziphile nje ngamaYuda? "
Kwabapostile benza iimpazamo. UPetros wayesebudlelane namaKristu angamaYuda aseAntiyokwe, ngokuhlwa ngokutya kunye nabo, okwakunxamnye nomthetho wamaYuda. Nangona amanye amaYuda eza kule ndawo, ke, uPetros wenza iphutha lokurhoxisa kwiintlanga; Wayengafuni ukujamelana namaYuda. UPawulos wambiza ekhohlisayo.
Ingongoma yeli bali kwakungekho embi-umlomo uPetros ukuya kwabaseGalati. Kunoko, uPawulos wayefuna ukuba amaGalati aqonde ukuba oko abaye bazama ukukwenza kwakuyingozi kwaye ayiyonto. Wayefuna ukuba bahlale bekulindile kuba uPetros wayedinga ukulungiswa aze axwayiswe endleleni engalunganga.
Ekugqibeleni, uPawulos wagqiba isahluko ngesigidimi sokuthi ulindiso luvela ngokholo kuYesu, kungekhona ukuthobela umthetho weTestamente Endala. Enyanisweni, kwabaseGalati 2: 15-21 ngenye yezona zivakalisi ezibalulekileyo ezilungileyo kwiZibhalo.
18 Ukuba ndiyakhela kwakhona inkqubo endiyichitha phantsi, ndibonisa ukuba ndingummeli womthetho. 19 Kuba mna ndifile ngomthetho, ukuze ndiphile ngoThixo. Ndibethelwe kunye noKristu 20 kwaye andisayi kuhlala, kodwa uKristu uhleli kum. Ubomi endihlala kulo mzimbeni, ndiphila ngokholo kuNyana kaThixo, owamthanda waza wazinikela ngenxa yam. 21 Andiyibeki eceleni ubabalo lukaThixo; kuba ukuba ubulungisa buza ngomthetho, ngoko uKristu wafa ngenxa yento.
Galati 2: 18-21
Yonke into yatshintsha ngokufa nokuvuswa kukaYesu Kristu. Inkqubo yeTestamente endala yokusindiswa yafa kunye noYesu, kwaye into entsha neyona nto yayingcono xa yavuka kwakhona - umnqophiso omtsha.
Ngendlela efanayo, sibethelelwe esiphambanweni kunye noKristu xa sithola isipho sosindiso ngokukholwa. Into esiyifanele ukuyiyo ibulewe, kodwa into entsha kunye nokuphucula ngakumbi kuYe kwaye ivumela ukuba siphile njengabafundi bayo ngenxa yobubele Bakhe.
Isiqingatha sokuqala sabaseGalatiya 2 siyaqhubeka sihamba noPawulos njengompostile kaYesu. Wayeqinisekisile kunye neenkokheli ezibalulekileyo zecawa zakuqala ukuba iintlanga zazingadingeki ukuba zamukele amasiko amaYuda ukuze zithobele uThixo-ngokwenene, akufanele zenze njalo.
Isiqingatha sesibini sesahluko sinobuchule sisomeleza umxholo wensindiso njengesenzo somusa kuThixo. Umyalezo weendaba ezilungileyo kukuba uThixo unikela ukuxolelwa njengesipho, kwaye siyifumana eso sipho ngokholo - kungekhona ngokwenza imisebenzi emihle.
Qaphela: oku kuluhlu oluqhubekayo oluhlola iNcwadi yamaGalathi kwisahluko-nge-sahluko. Cofa apha ukuze ubone isishwankathelo kwisahluko 1 .
Izindlela ezithe xaxa zokufumana amaqabunga ngaphandle kwebhodi lakho lokubhukuda
U-Eva Wonyaka omtsha, nguCharles Lamb
Ukuqonda i-Pipeline yeSikolo-ukuya ejele
I-GK Chesterton 'I-Piece of Chalk'
Indlela yokufunda Imenyu yesiFrentshi
Uhlaziyo lokubuyisela: Ukufuna iProtheni yeBhotile